Momba anay | Hebei Yangan Imp. Ary Exp. Co., Ltd.
ARTS SY NY FIAINANA MIVADIKA TANTERAKA DAHOLO
traikefa amin'ny famokarana
fahaizan'ny famolavolana tena
ho tanteraka tanteraka ny tetikasa
Fanohanana ara-teknika 100%
ary serivisy aftersale amin'ny fotoana rehetra
Ny sangan'asan'ny Atisan dia mazoto amin'ny fitrandrahana zava-kanto sokitra, fanitarana ny asa tanana sokitra nentim-paharazana ary ny tantaran'ny zavakanto mifantoka mandritra ny 42 taona mahery.
Ny orinasanay dia miaraka amin'ny atrikasa maoderina sy famolavolana modely tanimanga. Ny orinasan-tsika dia mihazakazaka sary sokitra maro karazana, toy ny loharano, gazebos, amina afo, sarivongana, tsanganana, vilany voninkazo, fanamaivanana, singa maritrano, vokatra metaly antitra, sary vongana abstract ho an'ny ravaky ny zaridaina, firavaka anatiny sy ivelany ary maritrano, indrindra ho an'ny trano sy tany sns.
Manana mpamorona matihanina sy mpanakanto matihanina izahay, afaka manamboatra sary sokitra mifototra amin'ny volavolanao na ny zavatra takinao. Hainay tsara ny asa tanana nentin-drazana, ny sary sokitra andrefana ary ny vokatra misy hevitra andrefana.
Ny orinasanay dia manambatra ny fanahin'ny mpanao asa tanana nentim-paharazana amin'ny teknolojia sokitra maoderina, mahatsapa ny fitambarana tonga lafatra amin'ny zavakanto sokitra nentim-paharazana sy ny famokarana marobe. Arts of Hebei Normal University and North China Institute of Electric Power, izay nanjary ny "base d'exploitation d'exploitation" an'ny Akademia. Tamin'ny 2013, teo ambany fitarihan'ny Profesora Lin Hong, akademisiana an'ny The Petrov Academy of Arts and Science of Russia, Nohamafisiko ny fikarohako sy ny fivoarako ary ny fahaizako mamolavola, ary andian-dahatsoratra maro nataoko no nahazo mari-pankasitrahana sy fiderana teo amin'ny sehatry ny asa.
Manaraka ny foto-kevitry ny Bronze Sculpture dia Wonderful Life, mankamamy ny zavakanto tsirairay avy izahay ary antenaina fa ny tsirairay avy dia afaka mankafy fahasambarana sy hatsaran-tarehy avy amin'izy ireo.
Miankina amin'ny hevitry ny mpamolavola manokana anay, ny fomba fanodinana nentim-paharazana ary ny fomba fanaingoana nohavaozina, dia mety hahazo sary kanto mahafinaritra sy miavaka ianao.
Ny orientation-nay: ny zavakanto sy ny fiainana dia mitambatra tanteraka amin'ny fotoana rehetra. Fananana asa-tanana nentim-paharazana sy famolavolana maoderina tsara tarehy hanolorana sary sokitra kanto miaraka amin'ny fanahin'ny mpanao asa-tanana amin'izao tontolo izao. Ny firafitry ny zavakanto sokitra dia mirakitra sary sokitra, sary sokitra munisipaly ho an'ny zaridaina sy zaridaina ary fampivelarana ny orinasa ara-kolontsaina sy famoronana.
Ny tanjonay: mifanatrika amin'ny orinasa ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia afaka manana ny kanto sy sary sokitra tena mahafa-po amin'ny vidiny tsara indrindra. Afaka mifanakalo hevitra amin'ny orinasa mivantana sy tanteraka ny mpanjifa. Amin'izany fomba izany, ny sary vongana farany tsirairay dia tsy vitan'ny hoe hahatonga ny fiainana ho tsara tarehy kokoa, fa ho sarobidy koa ho vavolom-belona.